Lixabiso nkqo Nkqo isichumiso isityumzi Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Yintoni na nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine?
Inkqubo ye- Nkqo Chain isichumiso isityumzi sesinye sezixhobo zokutyhoboza ezisetyenziswa rhoqo kwishishini lesichumisi esimbaxa. Inokulungelelaniswa okunamandla kwezinto ezinomxholo ophezulu wamanzi kwaye inokutya ngokutyibilikayo ngaphandle kokuthintela. Izinto ezibonakalayo zingena zisuka kwizibuko lokondla kwaye zingqubana nesantya esinevili ejikelezayo kwikhaya. Emva kokungqubana, izinto ziyakhanywa kwaye zaphuke, emva koko zingqubane nesando emva kokubetha udonga lwangaphakathi lwezindlu. Ngale ndlela, iba ngumgubo okanye amasuntswana angaphantsi kwe-3mm akhutshwe emva kweengozi ezininzi.
Ulwakhiwo nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine
Kwinkqubo yokutyumza, i Nkqo Chain isichumiso isityumzi ukusebenzisa isantya yolunye ophezulu-amandla banxibe carbide ikhonkco ipleyiti, kunye noyilo elifanelekileyo ukuze ugwebu kunye outlet, ukuze izinto ezigqityiweyo ikwimo efanayo kwaye ugcine akukho adhesion kumatshini. Olu hlobo isityumzi ukwamkela iteknoloji yakutshanje kunye ezikumgangatho ophezulu ngentsimbi, uyilo noun inkqubo, ngoko ke isivuno enkulu nokuthembeka eliphezulu.
Ukusetyenziswa nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine
LP uthotho Nkqo Chain isichumiso isityumzi ilungele ukutyumza umbandela omkhulu kwimveliso yemveliso yezichumiso, kodwa ikwasetyenziswa kakhulu kwimizi-mveliso yamachiza, izinto zokwakha, ezemigodi kunye namanye amashishini.
Izinto eziluncedo ze nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine
•Nkqo Chain isichumiso isityumzi yenye lokusila cage tye for ubungakanani eliphakathi.
•Nkqo Chain isichumiso isityumzi babe nesakhiwo esilula, kunye neyadi encinci, kunye nokugcinwa okulula.
•Nkqo Chain isichumiso isityumzi Umatshini unesiphumo esihle, ukusebenza ngokutyibilikayo, ukucoceka ngokulula.
•Lutshaba lwezixhobo ezininzi zobulukhuni.
Nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine Umboniso Video
Nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine Model Ukukhetha
Ubungakanani bokutya obukhulu (mm)
Ubungakanani bePartrick otyumkileyo (mm)
Imveliso Amandla (t / h)
Egqithileyo Imveliso emanyeneyo ye-Organic Fertilizer isebenzisa iCrusher
Okulandelayo: Amabini-Stage isichumiso isityumzi Machine